Xiriirka Turkiga iyo Sacuudiga oo si buuxda u soo noqonaya – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Xiriirka Turkiga iyo Sacuudiga oo si buuxda u soo noqonaya
June 22, 2022 Xuseen 0
Sarkaal sare oo ka tirsan Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo, in la filayo in booqashadan lagu gaaro ‘in si buuxda loogu soo celiyo xiriirka labada dal”. “Waa cusub ayaa bilaaban doona.” ayuu yiri sarkaalkan.
Erdogan ayaa lagu waday inuu qasriga madaxtooyada ku qaabilo Amiirka dhaxal-sugaha ah, si ay wadahadalo ula yeeshaan. Ma jiro xog guud oo laga soo saari dooni kadib kulankan.
Sarkaalka Turkiga ah ayaa sheegay in labada dal ay qaadeen xayiraadii saarneyd ganacsiga, duulimaadyada iyo daawashada taxanayaasha, iyadoo sidoo kalena la joojiyay wararka aan habbooneyn ee labada dhinac is dhaafsanayaan.